Tourism Trinidad iji kpughee ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Tourism Trinidad iji kpughee ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Trinidad na Tobago • Akụkọ dị iche iche
Njem njem nlegharị anya nke Trinidad Limited (TTL) ga-ekpughere weebụsaịtị ahia ahia ohuru a ghaputara ohuru maka agwaetiti nke Trinidad na Monday November 30, 2020 na 10am.
A ga-atụba ihe ngosi ahụ na weebụsaịtị #visittrinidad n'oge mmemme a na-eme nke ọma nke ga-adị ndụ ka ndị na-ekiri ya ga-emikpu onwe ha n'ime ihe niile ndị njem mba ụwa na ụmụ amaala "ga-enwerịrị" na Trinidad. Ebumnuche bụ isi nke weebụsaịtị bụ ịmepụta nghọta nke ebe na-enye ndị ọrụ akụkọ na ozi na-akpali akpali na akụkọ ntolite, ọdịbendị, na saịtị na ebe nkiri.
Ebe nrụọrụ weebụ na-aga n'ihu na-aga ngwa ngwa na Trinidad dị ike, na-arụ ọrụ ma dị irè, na-enwe nguzozi n'etiti inwe atụmatụ mara mma na ịdị mfe ịchọgharị, ma nwee ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ na-arụ ọrụ ịkọwa, mmetụta, ma kpalie mkpebi njem. Offọdụ n'ime atụmatụ ndị ọhụrụ gụnyere ihe ndị na-adọrọ mmasị dịka njem njegharị nke 360, ebe nchekwa COVID-19 nwere ezigbo ozi gbasara mmachi njem na usoro ahụike na nchekwa ọha, emelitere kalenda nke ihe omume kwa afọ, na nchịkọta njem njem na-atọ ụtọ. ụdị ọrụ dị iche iche nke na enwere ihe ọhụụ ọhụụ.
Ebe njedebe Trinidad website na-arụ ọrụ dị ka isi okwu maka onye ọ bụla na-aga Trinidad ebe ọ na-enye ozi gbasara njem nlegharị anya kwa ụbọchị na agwaetiti ahụ n'otu ebe. Ọ ga-akwadebe ndị njem n'ụzọ dị mfe iji nweta ozi iji nyere ha aka iji obi ike mee atụmatụ njem ha ma nọrọ na nchekwa n'oge njem ha. A na-ewepụta ebe nrụọrụ weebụ Destination Trinidad n'oge a iji wughachi obi ike n'etiti ndị njem na ịmaliteghachi njem n'enweghị nsogbu, kwekọrọ na nlekọta ahụike dị mkpa, mgbe ókèala meghere. Ọ na-ejekwa ozi dị ka ebe nchekwa bara ụba maka njem nlegharị anya ụlọ, maka ndị na-achọ ihe ọhụụ na ihe na-atọ ụtọ ịme n'azụ ụlọ ha.
Oriakụ Heidi Alert, onye isi na-ahụ maka ndị njem na njem nlegharị anya na Trinidad kwuru, "Obi dị anyị ụtọ iwepụta webụsaịtị ọhụụ ọhụrụ n'oge dị oke egwu maka ọtụtụ azụmaahịa njem njem gafee Trinidad" na ihe nkiri vidio dị oke egwu ma rụọ ọtụtụ ọrụ iji rata ndị ọbịa ịmatakwu banyere Trinidad ”.